Uthotho lukaXiaomi lwePoco lunokupheliswa | I-Androidsis
Uthotho lweXioomi's Poco lunokupheliswa
Zonke ii-smartphones ezikwikhathalogu yeXiaomi zibonisa elona xabiso liphezulu lemali kwintengiso, kanye njenge Redmi Qaphela 7, iselfowuni ethathelwa ingqalelo ngabona bantu baninzi njengabona bantu baninzi abanoqoqosho phakathi kuluhlu lwazo zonke, ngokuhambelana noko inako ukukuhambisa.
Omnye umzekelo owaziwayo woku sithi yi Poco F1 (ekwabizwa ngokuba yiPoco okanye iPocophone). Esi sixhobo sisebenzisa i-Snapdragon 845, ke ngoku sithetha ngesiphelo esiphakamileyo, kwaye sichongwe 'njengesiqhekeza sesikimu', kuba ixabiso elaphunyezwa ngalo latshabalalisa ezinye iimoto ezikwinqanaba elifanayo kunye neempawu ezifanayo ezazinikiwe. ukuya kuthi ga ngaphezulu kwexabiso eliphindwe kabini. Nangona kunjalo, nangona ithandwa kakhulu kwintengiso, uthotho olwakhutshwa phantsi kunokwenzeka ukuba luyekiswe ngumenzi kungekudala.
Amathandabuzo malunga nokuqhubeka kothotho lwe-Xiaomi Poco lweselfowuni lwavela kunye ukumiliselwa kwe Redmi K20 y I-K20 Pro. Zombini iiterminal zibeka isindululo etafileni sinomdla, ngaphezulu kwayo nantoni na enexabiso lemali yazo zombini, ezinokulinganiswa naleyo yePocophone, eyasungulwa kunyaka ophelileyo.
“UPoco wakhululwa ukuba anike ezinye izinto ezikhethiweyo ezikumgangatho ophezulu kumaxabiso aphakathi kuluhlu, ngolungelelwaniso olucacileyo kulwimi loyilo […] Kodwa ngoku, ngeli xabiso lexabiso le-Xiaomi's K-uthotho kunye neeflegi zayo eziphambili, izixhobo zekhompyutha kunye noyilo ngokugqibeleleyo ngokwemigaqo, isizathu sobukho bukaPoco njengophawu alithandabuzeki, ”utshilo uNavkendar Singh, umlawuli wophando kwinkampani yomhlalutyi i-IDC India.
Into exhasa ithiyori kaSingh yile ukuthula kwabaphathi abaphezulu beli Xiaomi brand. Oku kunike into ekufuneka uthethe ngayo, kwaye ikwanike ubungqina bokuba akanamdla umenzi waseTshayina onokuba naye malunga noluhlu lwayo lwePoco.
IPoco Launcher + Pixel Launcher = Isiqalisi esimangalisayo !!
Mhlawumbi IXiaomi ngoku iza kugxila ekumiliseleni ii-smartphones njengokhuphiswano njengePocophone phantsi kohlobo lwayo lweRedmiNgaphezulu kwayo nayiphi na into, ke olu luhlu lukhankanywe apha ngasentla alusayi kuphinda ludibanise iimodeli ezintsha. Ikamva loku lihleli ukubonwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Uthotho lweXioomi's Poco lunokupheliswa
Uyivula njani i-SIM yetreyi yefowuni yakho ye-Android ngaphandle kwesixhobo esisemthethweni
URedmi ukumilisela ifowuni ye-MP ye-64 MP kungekudala